Readdle yatove nemashandisirwo ayo akagadzirira iOS 11 | IPhone nhau
Readdle iwe uchitova nezvikumbiro zvako zvakagadzirira iOS 11
iOS 11 ingori mazuva mashoma kubva pakuburitswa kuruzhinji. Apple inotarisirwa kuvhura iyo yekupedzisira Beta kana Goridhe Master pazuva rimwechete neiyo iPhone X mharidzo, munaGunyana 12, uye mushure memazuva mashoma vhura vhezheni yekupedzisira yeruzhinji. Tatarisana nekuvhurwa kwakadaro kuri padyo, ma skinner atove pabasa uye mu Readdle ivo vatove nemaapplication avo akagadzirira iyo mitsva mashandiro eIOS 11.
Scanner Pro, Spark, Nyanzvi yePDF uye Zvinyorwa zvinounza nhau huru mukuvandudzwa kwavo ne emukurumbira wakasarudzika weiyo "dhonza uye udonhedze" basa pane iyo iPad. Kubvira panguva iyo iOS 11 yaburitswa, izvo zvekuvandudzwa zvichave zvakagadzirira kurodha pasi kubva kuApp Store, asi isu tanga tichida kuvakuratidza.
1 PDF Nyanzvi
Iyo yakanakisa kunyorera manejimendi magwaro ePDP yakagadziridzwa pamwe nekukweva uye kudonhedza basa iro Apple yawedzera muIOS 11 ye iPad. Unogona kudhonza mifananidzo kubva kuSafari kuenda kugwaro rePDF kana kuwedzera se peji nyowani. Unogona kudhonza mafaera ePDF kune mamwe maPDF kuti ubatanidze ivo mufaira rimwe chete. Kudhonza mameseji kubva kuSafri uye nezvimwe zvinoshandiswa zvichawanikwa.
Mumwe weanonyanya kufarirwa mamaneja mafaera zvino achazotsigirawo kudhonza uye kudonhedza, zvichikubvumidza iwe wedzera mifananidzo uye zvinyorwa, joina mafaera uye mapeji, fambisa ZIP mafaera kubva kuSpark, iyo Readdle tsamba mutengi.
Imwe yeakanakisa kunyorera masitepisi kubva ku iPhone anokwanisa kugadzirisa nekukwevera uye kudonhedza basa ku kuunza mafoto kubva kuKamera yako Roll kana kuunza mashoma magwaro kuMagwaro kana chero kumwe kunyorera.
Iyo yaunofarira email mutengi kune vazhinji inokutendera iwe tora zvinongedzo, mafaera kana mifananidzo kubva kune chero application kune iyo email yaunoda kutumira, kana nenzira yakatarisana, kubva paemail kuenda kune chimwe chishandiso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Readdle iwe uchitova nezvikumbiro zvako zvakagadzirira iOS 11
Aya ndiwo marongero matsva eFace ID kuvhura iyo iPhone X
Mhosva dzekutanga dzeiyo iPhone X dzinotanga kuvhurwa